“Puntland Professor way eeday” | WARARKA PUNTLAND
Home Maqaal “Puntland Professor way eeday”
“Puntland Professor way eeday”
Waa su’aalo bulshadu is weydiineyso, laakiin warbaahinta xorta ahi duruuftu u saamixi wayday in ay weydiiyaan Madaxweynaha Puntland.
Ha u maleyn in uu waraysigu run yahay, laakiin u qaado in uu runta ka hadlayo.
Weriye:- Md. Madaxweyne ka waran mooshinka lagu cunay Guddoomiyihii Baarlamaanka Puntland?
Gaas – Wuxuu ahaa nin xun oo madax adag adag, lacag jecel oo aan saaxiibtinimo aqoon.
Weriye – Ma laga yaabaa in ay adigana mooshin kaa keenaan, haddii ay dhacdo maxaad isku difaaceysaa.
Gaas – Waxan ay sameeyeen horay Puntland ugama dhici jirin, waa bidco, ogow in sharcigu ii ogol yahay in aan kala diro kuligood oo baarlamaan cusub bulshadu soo dooran doonto, kuwaan waxaa ku jira gafanayaal gaamuray oo intii Puntland jirtayba soo taagnaa, iyo kuwo uu madax maray Faroole oo …
Weriye:- Madaxweyne; maxaad u bixin weyday mushaharka ciidamada iyo adeega dowladda, lacag miyaan dekedda ka soo xeroon?
Gaas – kkkkk, yaad warkaas ka maqashay ma Siciid Dheere, wuxuu diiday in ciidamada la tirakoobo, anaguna ciidan aan muuqan mushahar ma siin karno waayo….
Weriye – Laakiin Madaxweyne, shaqaalaha dowladuna ma tirakoobna miyaa?
Gaas – Markii aan xukunka qabtay waxaan ogaaday in shaqaalaha dowlada aysan beeluhu u sineyn, tirakoobkii ayaa socda dhowaana waa dhamaan doonaa, mushaharkoodana way heli doonaan.
Weriye – Waa gartay, laakiin Madaxweyne, Sanad iyo bar way adag tahay in dowladaadu mushahar la’aan looga cowdo, lacagta soo xerootay xagee ku baxday.?
Gaas – Dadka Puntland wax sheeg sheeg ayaa ka soo haray iyo eedeyn, yaa dhisay buundada Dangoroyo, maxaa lagula dagaalamay Al-shabaab, wixii marti dhulkeena imaaneysay maxaa lagu sooray, …….?
Weriye – Ma rumoobay halhayskaagii ahaa Puntland ha isku tashato?
Gaas – Haa waa rumowday, bulshadu iyagaa ku deeqay lacagta lagu dhisay buundada Dangorayo, waana mahadsan yihiin.
Weriye – Maxaa sababay in aad si dhameystiran u dhisi weydo dowladaada?
Gaas – Qabiil walba wuxuu sheegtaa wasaaradda ugu fiican in ay leeyihiin, waa mushkilada sababta in arrintaas wax badan laga qaban waayo, waxaa ugu daray kan Madaxweyne ku xigeenka ii ah Bud ayuuba sitaa, kii is casilay ka daran, meeshan maxaa wax la qabtaa, lugtayba igu dhegan yihiine.
Weriye – Waxaad awooday in aad cayriso Cali X. Warsame oo lagu tirinayey in uu ahaa wasiirka keliya ee ugu wax qabadka fiicnaa, waxaana la sheegaa in uu abaal kugu lahaa xiligii doorashada la’aantiisna aadan madaxweyne noqoteen, micnaha beeshiisu kuuma imaan miyaan?
Gaas – No comment
Weriye – Bal ka waran Shire X. Faarax isagana beeshiisu wareerka ma ka maqnaayeen?
Gaas – Waa nin fiican, kuwo beeshiisa ah ayaa doonayey in ay qaataan wasaarado aan micne laheyn, waan u hiiliyey meel fiicana waan geeyey.
Weriye – Haddii aan dib ugu noqono dhinaca dhaqaalaha ka waran dakhligu sidee yahay?
Gaas – Lama arag oo lama maqal, haddana dekedda waa la balaarinayaa sow ma maqal?
Weriye – Haddaba maxaa sababay in dowladaadu daabacdo lacagta Kunka Shilin ah adigoo aan ogolaasho ka helin Baarlamaanka?
Gaas – No comments
Weriye – Madaxweyne, maxaa sababay in kulankii Toddobaadlaha ahaa ee Golaha Xukuumadu uu qabsoomi waayo bilihii la soo dhaafay?
Gaas – Waxba keeni mayso in Garoowe la iska fadhiyo oo been la isla soo hor fariisto, waad aragteen shaqada aan Gaalkacyo ka qabanay, kulamada caalamiga ah ee aan u safrayo, waxaa ka daran dowladda Federaalka in la inagu khiyaameeyo ayaa la doonayaa waxaan tagnay Xamar oo iska soo celinay, shirkiina Garoowe ayaa lagu qaban doonaa, haddaba, meel iska fadhi waxaa ka fiican socod iyo xuuraan si aynu ula jaan qaadno dunida inteeda kale.
Weriye – Mudadii maamulkaagu jiray waxaa xoogsaday musuqmaasuqa iyo xisaabtan la’aan gaamurtay….?
Gaas – Soomaalidu iyagaa jecel musuqa, intaas iska daaya ayaan leenahay, maxaan sameyn karaa keligay
Weriye – Maxaad ka ogtahay Maraakiibta jariifka iyo doonyaha kalluumeysiga ee Iiraan oo badda xaalufin xun ku haya, ?
Gaas – Su’aashaas waxay fiicnaan laheyd in la weydiiyo Biindhe isagaa wasaarada wasiir ka ah, aniguna shaqadiisa faraha lama galo, laakiin mid baan ogahay in ciidamada baddu ay soo qabtaan doonidii aan sidan sharci ama ogolaasho, markaas kadibna la ganaaxo ogolaashana la siiyo.
Weriye – Madaxweyne, hadda maxaa kuu qorsheysan waad aragtaa wadanka dhibaato badan ayaa ka jirta, mushahar la’aan, musuqmaasuq, xisaabtan la’aan, fakhriga oo sii badanaya iwm?
Gaas – Horaan u sheegay Puntland ha isku tashato, Walaahay Bilaahay Tolaahay bulsho aan iyagu wax qabsan meel ma gaarto, marka ha la isku tashado.
Weriye – Waad Mahadsan tahay Madaxweyne.
Gaas – Adigaa mudan
This post has already been read 203624
Previous articleDowladda Puntland oo joojisay dhagaysiga Deegaanada Puntland Idaacada Maraykanka ee VOA: Akhri Qoraalka lagu mamnuucay in la baahiyo Codka Idaacda
Next articleSanaag oo la weeraray iyo Garoowe dad siyaasiyiin lagu xirxiray qaar kalena baadi-goob Laamaha Amnigu ugu jiraan